Họtelu ndi di na Port Harcourt, Rivers - Tinye akwụkwọ ugbu a, Kwuọ ụgwọ ma emesi a!
Họtelu Port Harcourt
Nweta nlekota nke onye ọbịa pụrụ iche dị ka I ga ano ubochi ezumike gị ma ọ bụ nke gi na ndi ezinụlọ, ndi enyi gi na ndị i hụrụ n'anya na Port Harcourt na Nigeria. Port Harcourt bụ isi obodo nke Rivers Steti, buru kwa nke di na akuku mmiri Bonny nke di na Niger Delta.
Ime njem nke Ugboala na ọdụ Ugboelu nke PortHarcourt
Ime njem bụ ihe di nfe na obodo Port Harcourt dị ka e nwere ọdụ ogboelu ukwu nke mba uwa na Port Harcourt nke onọdụ ya di na Omagwa , tinyekwara ọdụ ugboeleu nke ndi agha-elu (Nigerian Air Force) bu nke a na- eji eme njem nime Nigeria. Ugboala njem na Port Harcourt abụghị ihe nsogbu dị ka I ga ano ubochi ezumike gi. E nwere ugboala ndi di ọnụ ala eji eme njem na gburugburu PortHacourt bu nke I puru I nweta tinyekwara ụfọdụ ogige ebe njem nleta ndi di nkpa di iche iche.
Ị puru n'ụzọ dị mfe nweta ụgbọala mgbasinye nke akwu-ugwo ebunye, ma ọ bụ ndi ọrụ ugboala tagzi ga eburu gị na ebe i chọrọ I ga. E nwekwara ugboala bọs, ogba tum-tum na ugbo mmiri, bu nke di mfe i nwere ike banye ngwa ngwa na ebe i na-aga. Na usoro ime njem ndị a, ime njem site na otu ebe ruo na ebe ndi ozo agaghi abu ihe nsogbu ọ bụla nye gi.
Ogige Ebe Njem Nleta Kacha nma na Ph
Na Port Harcourt, ị ga- ahụ ọtụtụ ebe njem nleta ga eme ka ubochi ezumike gi buru otu nime ndi kasị mma na otutu ị garala. E nwere ọtụtụ ogige ebe nleta dị ka ị na-eme atụmatụ ime njem ezumike gị na Port Harcourt, ogige ebe njem nleta ndi dị ka ebe a na esiputa mmanụ ugboala na (Eleme na nke Port Harcourt) ebe a na esiputa mmanụ eji eme ihe nke ọha na eze na Nigeria na ozuzu oke. I pukwara I ga leta oke osimiri nke Port Harcourt bu nke a na akpo (Port Harcourt Tourist Beach na okwu beeke) ebe ị ga enwe ọdịdị ihe okike na ozuzu oke wee ga kwa ije n'egberé mmiri nke oké osimiri a. Ọzọkwa, ị nwere ike ị ga ebe ndi dị ka ebe ugbo mmiri na akwusi bu nke a na akpo (Sea Ports) na okwu beeke, Isaac Boro Park, Monument of King Jaja, Rivers State Museum, Bonny Island, Novotel Port Harcourt .
Họtelu ndi di na Port Harcourt bu ndi amara maka udi ya puru iche na I nye ndi ọbịa ya ihe ngwa oka ibe eji ebi ndu na họtelu. Owuwe anya di na I ghaghị I nweta otu nime ezumike kachasi nma ma ọ bụ ezumike ituru anya ya na oge ndi gara-aga. Gaa Leta họtelu ndi dị elu bu ndi dị ka họtelu mba Switzerland (Switzerland International Mabisel Port Harcourt), Best Western Premier Port Harcourt Họtelu, Habitat Họtelu and Resort, na Hotel Presidential Port Harcourt na ikpotu ole na ole aha.
Họtelu Ọ bụla na Port Harcourt na enye gị nlekota onye ọbịa di ukwuu kachasi nma na nchekwa iji hụ na ị nwere ihe kasị mma na oge ezumike gi na ezi ihe nke ego gị.
Ọzọkwa, site na ihe ngwa ọrụ ọlọrọ ohu ha di nma nke ukwuu, ọnụnọ gị na Port Harcourt ga a bu echiche i na gaghị echefu echefu. Port Harcourt bụ otu nime ebe ị ga-enweta ihe obi ụtọ kasị mma na nlekota na Nigeria, dị ka ha bụ ndị udo na anabata ndi obia. Mee ọsọ ọsọ ugbu a tinye akwụkwọ na Jumia Travel site na igwe kọmputa maka ọnụnọ na họtelu ndi kachasi nma na Port Harcourt, ebe njem nleta na ebe ntụrụndụ.